INkcubeko kunye neNdalo yabantu
Ubuchule bokudlulisa ulwazi kwizizukulwana kunye noontanga ngeendlela ngaphandle kokutshintshiselwa kwemfuza kuyindlela ebalulekileyo yeentlobo zabantu; ngakumbi ngakumbi kubantu kubonakala kunamandla okusebenzisa iifom zokufanisa ukuthetha. Kusetyenziswa kwe-anthropological yekota, "inkcubeko" ibhekisele kuzo zonke iinkqubo zokutshintshiselwa ngolwazi olungenayo i-genetic okanye i-epigenetic. Oku kubandakanya zonke iinkqubo zokuziphatha kunye nezibonakaliso.
Nangona igama elithi "inkcubeko" liye lancinci ukususela kwixesha lokuqala lamaKristu (siyazi ukuba uCicero wayisebenzisa), ukusetyenziswa kwayo kwe-anthropological kwakhiwe phakathi kokuphela kweshumi elinesibhozo-amakhulu kunye nokuqala kwekhulu leminyaka edluleyo. Ngaphambi kwesi sikhathi, "inkcubeko" ibhekiswe kwinkqubo yemfundo apho umntu ayenayo; ngamanye amagama, kangangokuba iikholeji "zenkcubeko" yayinxulumene nefilosofi yemfundo. Ngako oko singatsho ukuba inkcubeko, njengokuba sisisebenzisa ixesha elide namhlanje, liyilo lwakutsha nje.
INkcubeko kunye neNxulumano
Ngaphandle kwexesha lokuhlaziya, i-anthropological conception of culture iye yindawo yezona ndawo ezicebileyo zenkcubeko. Nangona ezinye iindawo zineenkcenkcesho ezicacileyo zesini kunye nolwahlulo ngokobuhlanga, umzekelo, abanye ababonakali babonakalisa i-metaphysics efanayo. Iingcali zenkcubeko zibonisa ukuba akukho nkcubeko inomhlaba we-truer ngaphandle kweyiphi na; bahluke nje.
Isimo sengqondo siye saba phakathi kweminye imibhikano engalibalekiyo kwiminyaka emashumi edlulileyo, iqhutywe ngemiphumo yezopolitiko.
Iingcamango zenkcubeko, ngokugqithiseleyo ngokubhekiselele kwimeko yehlabathi jikelele , iye yavelisa ingcamango ye-multiculturalism. Ngendlela enye okanye enye, inxalenye enkulu yehlabathi labantu bahlala kwiinkcubeko ezingaphezu kweyodwa , kuba ngenxa yokutshintshiselwa kwamacandelo okutya, okanye ulwazi lomculo, okanye imibono yefestile, njalo njalo.
Indlela Yokufunda Inkcubeko?
Enye yeengcaphephe ezithandekayo zeenkcubeko yindlela yokusebenzisa iindlela eziye zafunyanwa kwaye zifundiswa. Kubonakala ukuba, ngokwenene, ukuba ukuze ufunde inkcubeko umntu kufuneka asuse kuyo, oko ngandlela-thile ithetha ukuba indlela yodwa yokufunda inkcubeko kungabandakanyi.
Ukufundwa kwenkcubeko kubangela enye yezinto ezinzima kunabo bonke ngokubhekiselele kumntu wobuntu: ungayiqonda ngokwenene ngokwakho? Ulungelelwanjani uluntu olunokuziphonononga ngalo? Ukuba amandla okuhlalutya komntu okanye iqela lilinganiselwe, ngubani onelungelo lokuhlalutya olungcono kwaye kutheni? Ingaba kukho imbono yembono, eyona nto ifanelekileyo ukufundisisa umntu okanye uluntu?
Akuyona ingozi, umntu unokuphikisa, ukuba i-anthropology yenkcubeko iqhutywe ngexesha elifanayo apho i-psychology kunye neentlalo zentlalo nazo zikhula. Noko ke, zonke izifundo ezintathu zibonakala zifumana ubunzima obufanayo: isiseko esiyinquthakathaka esichaseneyo malunga nolwalamano lwabo kunye nento yokufunda. Ukuba kwintlalo yengqondo kubonakala kusemthethweni ukubuza ukuba zeziphi izizathu iingcali zineengqiqo ezingcono kumntu wesigulane kunokuba isigulane ngokwaso, kwi-anthropology yeenkcubeko inokubuza ukuba zeziphi iimbono ze-anthropologists ezikwazi ukuqonda kakuhle iinguqulelo zoluntu kunamalungu kuluntu ngokwabo.
Indlela yokufunda inkcubeko? Lo usengumbuzo ovulekile. Kuza kubekho, ngokuqinisekileyo kukho amanyathelo amaninzi ophando ozama nokujongana nemibuzo ephakanyiswe ngasentla ngeendlela eziyinkimbinkimbi. Nangona kunjalo isiseko sibonakala sisisidingo sokuqwalaselwa, okanye ukuphinda sibhekiswe kuyo, kwimbono yefilosofi.
Ukufunda okuqhubekayo kwi-Intanethi
Ukungena kwizinto eziphilayo kwiStanford Encyclopedia of Philosophy .
Ukungena kwi-multiculturalism eStanford Encyclopedia of Philosophy .
Ukungena kwenkcubeko kunye nesayensi yolwazi kwiStanford Encyclopedia of Philosophy .
Ifilosofi yeengqondo zamaJokes: i-Funnies malunga nokuzimela nokuCognition
Ukuxhomekeka kwamanye amazwe
I-North American Inline Skating Marathons
IHarvey Mudd iKholeji ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukusebenzisa isenzi saseSpain 'Pasar'
Indlela yokwenza izibhamu ezingenzi iPopu
I-Beat ithathe i-Haiku: Izivakalisi zase-Ginsberg zaseMelika
Das Mädchen: Kutheni iLizwi 'Intombazana' libhekiselele kobulili
IJava Ngaba Iimeko Zesivakalelo
I-Recipient Recellent Recipe yemvelo
Imithetho esemthethweni yeVolleyball
IiNveli eziPhambili kwiiKlasi zeeMerika zoLwazi
Abaculi be-10 abaPhambili bamazwe ngama-2000 (ngokusekelwe kwiNombolo ye-1 kuPhupha)
UYesu Abantu base-USA (JPUSA)
Intloko yeKlabishi kunye no-200+ Amanye amagama onokuyipela usebenzisa amanqaku omculo
2017 I-MCAT yamaphuzu okukhishwa kwamaqaku